Faah faahin Dheerad ah oo ka soo baxaysa Qaraxi kadhacay Dalka Masar – Radio Muqdisho
Warbaahinta Masar ayaa sheegtay in ugu yaraan 235 qof ay ku dhinteen bambaano iyo weerar qoryo leh oo masaajid ku yaala waqooyiga Sinai Peninsula.
Weerarka ayaa ka dhacay magaalada al-Abed oo ah magaalo ku taala waqooyiga Sinai, wax yar ka dib markii salaadda Jimcaha .
Warbaahinta dalka Masar ee MENA ayaa dhimashadii sheegtay in ay gareeyso ku dhawad 235, iyada soo xigatay ilo lagu kalsoon yahay oo rasmi ah Waxa kale oo uu sheegay in 120 qof ay ku dhaawacmeen weerarka.
Maasjidka oo ku yaal Bir al-Abed, qiyaastii 40km galbeed ka xigta El Arish, caasimadda gobolka Waqooyiga ee Siinaay.
Xukuumadda Masar waxa ay ku dhawaaqday mudo sadex maalmood ah oo baroor diiq ah.
Madaxweynaha Masar Abdel Fattah el-Sisi ayaa cambaareeyay weerarka, kaas oo uu ku tilmaamay “dambi” iyo “fulaynimo” oo lagu soo bandhigay jariidadda telifishanka on Friday.
Wuxuu tacsi u diray Madaxweyne C/fitaax AL SIISI Dhibanaayshi iyo Qoysaaski waxa yeeladu kasoo gartay Qaraxa.
Milatariga Masar ayaa weeraro cirka ah ku qaaday bartilmaameedyada goobaha buuraha ku wareegsan saacado ka dib markii la weeraray, ilaha ammaanka.
Ma jirto koox sheegatay mas’uuliyadda balse xiriiriyayaasha maxalliga ah ee Islaamiga ah ee Ciraaq iyo kooxda Levant (ISIL) ayaa sheegatay weeraradii hore.